Teknụzụ Azụmaahịa: Ha bụ otu?
You ga-abụ onye technology ọkachamara ịbụ onye ndu na Marketing? Azụmaahịa na teknụzụ dị ka ihe agbanweela n'ime afọ iri abụọ gara aga.
Ọbụna ndị na-ede kọọpị kwesịrị ịghọta etu ndị mmadụ si agụ peeji - na-eme nnwale A / B, ịmata ojiji ọcha, na ilele maapụ ọkụ. Ndị na-ahụ maka ika na-ekesa akwụkwọ ntuziaka ndị nwere akara pixel, agba dị mkpa na okwu mkparịta ụka na ika ahụ niile anwale ma gosipụta ya na teknụzụ. Ndị na-ere ahịa na-aghọta ihe ederede dị omimi na ahịa data.
Ndị a bụ ole na ole n'ime ihe atụ, mana ọ na-atọ m ụtọ na osote onye isi oche nke azụmaahịa n'ụwa taa ga-abụrịrị nke ọma karịa ikike na nzaghachi nzaghachi dị na teknụzụ karịa ka ha mere ọtụtụ afọ gara aga.
Echetara m mgbe m banyere n'ọfịs VP otu oge mgbe m rụrụ ọrụ na akwụkwọ akụkọ, ha wee sị, "Gịnị bụ ihe a Database Marketing Manager na-eme?" Nke ahụ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10 afọ gara aga ma enwere m ụjọ. N'eziokwu niile, onye ahụ ghọtara mkpakọrịta okwu, idetuo ederede na nhazi peeji nke… ọ dịghị ihe ọzọ. Ha adighikwa anya…
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-etolite ma na-arụ ọrụ ahụ ka ọ nwekwuo nkọwa, onye isi ahịa na-abawanye. Ọbụna njikwa azụmaahịa weebụ kwesịrị ịghọta search engine njikarịcha, search engine ahịa, imewe, mbọn, njikarịcha ntụgharị, detuo ederede, A / B ule, nchịkọta, okpomọkụ nkewa… Ịkpọ aha ole na ole!
You bụ onye ndu ahịa nke na anaghị adabere na teknụzụ? Ọ ga-amasị m ịnụ ụfọdụ arụmụka na nke a. Ekwetaghị m na onye ndu ahịa ga - amatarrịrị ihe dị iche iche teknụzụ ndị a ma ọ bụ otu esi eme ha… ha nwere ihe ha ga - Agbanyeghị, ịnwe nghọta maka teknụzụ dị ka ihe kwesịrị n'akwụkwọ m.
Tags: klout akaraMobile na Mbadamba ụrọWordPress
Ọ bụrụ na ị naghị eji teknụzụ na Ahịa ị na-azụ ma na-efunahụ nnukwu arụmọrụ na ohere! Maka ire ahia na-arụ ọrụ nke ọma, ọ nwere teknụzụ ha nhata iji nweta nsonaazụ. My abụọ cents….
Jenụwarị 28, 2010 na 2:53 PM
Gaghị anụ ka m na-arụ ụka megide inwe nghọta na ịnabata teknụzụ. Kama nke ahụ. Ọ bụ ihe achọrọ iji ghọta teknụzụ ma ọ bụ ngwa a na-anabata ihe niile ị na-eme dị ka marketer. Ọ bụrụ na isi ahịa na isi IT enweghị ike ikwu otu asụsụ ohere maka ịga nke ọma ga-adị ole na ole n'etiti. .
Jenụwarị 28, 2010 na 3:26 PM
Kpamkpam kwenyere na gị, Douglas. Mark W. Schaefer hapụrụ nzaghachi a na post blog nke akpọrọ "Darwinism & Social Media".
Taa, ọsọ ọsọ nke mgbanwe ga-akọwapụta mba, ndị mmadụ na ihe ịga nke ọma nke ndị mmadụ n'otu n'otu. Ọ bụ mmalite ọhụrụ. Ọdịnihu abụghị nke ekwesiri ike mana kama nke kacha eme mgbanwe, ndị nwere ike ịchọpụta etu esi eji mgbanwe teknụzụ maka uru asọmpi ”.
Hamilton Wallace kwuru
Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịghọta mgbanwe nke teknụzụ nke na-ebunye ozi ha. Mana n'eziokwu, anyị kwesịrị ịnọrọ na teknụzụ agnostics: alụghị onye ọ bụla, dị njikere iji ihe jikọrọ anyị na ebe ndị ahịa anyị nọ taa.